Kitra – «Mondial 2018» : nentin’i Messi any Rosia i Arzantina | NewsMada
Kitra – «Mondial 2018» : nentin’i Messi any Rosia i Arzantina
Afaka, tao anatin’ny ady sarotra sy ny fitaintainana mafy, ny Arzantin. Misiotsioka izy ireo, ankehitriny, fa tafavoaka ny ala. Tafita hiatrika ny “Mondial 2018”, tanterahina any Rosia, ihany ry zalahy, taorian’ny nandreseny an’i Ekoatera, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 1, ny talata lasa teo. Fihaonana, notanterahina tany Quito, teo amin’ny fifanintsanana, ho an’ny faritr’i Amerika.
Vitan’i Messi ny nanatanteraka ny nofinofin’ireo Arzantin antapitrisany, nanaraka mivantana ny fihaonana, hiatrehana indray ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany. Izy avokoa mantsy no nampiditra ireo baolina telo, nahatafita ny Albiceleste. Efa tao anatin’ny tebiteby anefa satria vao nanomboka 1 mn monja ny fihaonana, efa nahatafiditra baolina ry zareo Ekoaterianina. Nambaran’ilay Anglisy, Gary Lineker, taorian’ity fandresena azon’i Arzantina ity, fa “mbola misy fanantenana, raha mbola misy i Messi”. Nohamafisin’ireo mpanao gazety, nitantara ny lalao fa tsy matsiro ny “Mondial” tsy misy an’i Messi.
Ankoatra izay, manao veloma ny “Mondial 2018” ry zareo Bekintana, izay lavon’ny Trinité et Tobago, tamin’ny isa tery 2 no ho 1. Etsy ankilany, ekipa vaovao amin’ity fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ity i Panama, nandavo an’i Costa Rica, tamin’ny io isa io, ihany koa.